Global Voices teny Malagasy » Tohano ireo feo maro ao amin’ny Global Voices – Manomeza fanampiana izao! · Global Voices teny Malagasy » Print
Tohano ireo feo maro ao amin'ny Global Voices – Manomeza fanampiana izao!
Voadika ny 15 Desambra 2010 17:19 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell Nandika Candy
Satria isika manakaiky ny faran'ity taona nanahirana ity ary hanao jery todika ny 12 volana farany teo, dia afaka manamarina zavatra iray izay efa noeritreretina foana: taona nahafinaritra ho an'ny Global Voices ny taona 2010! Ny fikambanantsika—izay mankalaza ny tsingerintaona faha-6 tamin'ny 11 Desambra—dia nandalo fotoana maro nanaitra sy feno famoronana nandritra ny 12 volana farany teo: nahazo fiaraha-miasa media vaovao tena mahaliana isika, nampivoatra ny fahaizantsika mikaroka, ary nanao fanovàna goavana amin'ny fomba hanakaikezana ny vontoaty amin'ny tenim-pirenena maro. Ary rehefa tsy nanao lahatsoratra ho an'ny vohikala ry zareo, dia samy niasa mafy ny mpikambana ao amin'ny vondrontsika, tsy nikely aina ho an'ny faritra iadidiany, manisy marika amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tetikasa haino aman-jerin'olon-tsotra mitondra fanavaozana sy manan-kery amin'ny tontolony .
Taona ho an'ny Vovonana Iraisam-pirenena koa ny taona 2010 ho anay. Indro ny ampahany amin'ny vondrom-piaraha-monin'i Global Voices teo anoloan'ny Tranombokim-bahoaka any Santiago, Chili, izay nampiantrano ny fivoriana tamin'ity taona ity.
Tamin'ny 2010, vondrona “mponin'i GV” maro no namorona tetikasa mampiaraka ny fanoloran-tena amin'ny fahafahana hahazo vaovao. Ireo mpikambana ao amin'ny vondrontsika avy any Brazil dia nanangana ny Eleitor 2010  hanaraha-maso ny tsy fetezan-javatra mifandraika amin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny Oktobra 2010. Awab Alvi , Sana Saleem , Salman Latif  sy ny hafa avy amin'ny ekipan'i Pakistana dia tany amin'ireo faritra tratran'ny tondra-drano tany amin'ny fireneny mba hanampy  ireo ezaka famonjena, ary koa nanangana ny Pakreport.org  handraketana sy hanaraha-maso ny filàna vonjy sy ny setriny. Onnik Krikorian  dia nanomboka ny seha-pitaterana manokana Caucasus Conflict Voices (Feon'ny Disadisa any Caucasus)  ary tamin'ny fananganana ny tontolo, nanao asa fanofanana sy fampianarana maro momba ny fampiasàna ny media raitra, mba hametrahan'ny fandriampahalemana any amin'ny faritra. Alexey Sidorenko sy Gregory Asmolov avy amin'ny tetikasantsika RuNet Echo  dia namorona ny russian-fires.ru  handraketana sy handaminana ny famonjena olom-pirenena voadonan'ny hain'ala nanimba nandritra ny lohataona tany Rosia – ary nahazo loka goavana  ho valin'ny ezaka nataony.
Eleitor 2010, nasongadin'ny ekipantsika avy any Brazil, dia nanara-maso ireo tsy fetezan-javatra nifandraika tamin'ny fifidianana ankapobeny tany Brazil
Ny Technology for Transparency Network (Tambajotra Teknolojia ho an'ny Fangaraharahàna)  an'ny GV, tetik'asa fikarohana vaovao natomboka tamin'ity taona ity, dia nandrakitra ireo tetikasa sahanin'ny olon-tsotra izay mampiasa teknolojia fampitam-baovao mba hanaraha-maso ny fangaraharàna sy ny fahamarinana. Nanokatra ny asantsika tamin'ny tontolo vaovao ny fiaraha-miasa media vaovao amin'ny The Economist , ny gazety Italiana mpivoaka isan'andro La Stampa , ny foiben'onjam-peo Rosiana Echo Moskvy , ary ny tetikasa goavana iarahana amin'ny BBC Online tamin'ny volana May. Tamin'ny 2010 koa isika namita ny fanaraha-maso ara-drafitry ny vohikalantsika mba ahafahana mamoaka lahatsoratra avy any am-potony amin'ny tenim-pirenena hafa ankoatran'ny teny Anglisy.
Ahafahan'ny lahatsoratra mivoaka amin'izay tenim-pirenena misy ao amin'ny vondron'ny mpandika tenintsika ny fiovàna natao tamin'ny rafitry ny vohikala.
Tamin'ny 2010 ny mpanangana ny Global Voices, Rebecca MacKinnon  sy Ethan Zuckerman  dia nanome porofo maromaro ny amin'ny antony mahatonga azy ireo ho isan'ny mpitarika tó teny amin'ny aterineto manerantany. Nanao TED talk  i Ethan izay tena naneho tsara ny vokatry ny tambajotran'ny haino aman-jery ankapobeny, sy ny akon'ny haino aman-jerin'olon-tsotra izay tsy mitsaha-mitombo. Taorian'ny fisehoana am-pahibemaso maro sy tanatina lahatsoratra tao amin'ny gazety tahaka ny Wall Street Journal, nanomboka niasa i Rebecca tamin'ny bokiny Consent of the Networked , “torolàlana ho an'ireo olom-pirenena voakasika momba ny hoavin'ny fahalalahana amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto”.
Na eo aza ny fahombiazana ao amin'ny fiaraha-monintsika sy any an-kafa, mbola voarahona ihany ny haino aman-jerin'olon-tsotra maneran-tany, ary nahazo ny anjarany tamin'ny resaka fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny aterineto. Mety ho efa navotsotra  ireo mpitoraka blaogy Azerbaijani Emin Milli sy Adnan Hajizade , ary navotsotra  ihany ilay egiptiana Kareem Amer rehefa tany am-ponja nandritra ny 1 470 andro, nefa anisan'ireo nenjehina tamin'ity taona ity noho ny fanehoan-kevitra tamin'ny aterineto ny namanay sy mpandray anjara amin'ny GV Ali Abdulemam  avy any Bahrain, sy ilay Iraniana mpiara-miasa taloha Hossein Derakhshan , izay samy mbola any am-ponja avokoa.
Ny anjaran'i Kareem, Emin, Adnan, Hossein, sy ny hafa, araka ny hita ao amin'ny tetikasa Threatened Voices , dia fampahatsiahivana fa mbola tandindonin-doza ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny faritra maro maneran-tany. Mampiseho ny valin'ny Wikileaks  fa lasa olana goavana iadian-kevitra amin'ny firenen-drehetra eran-tany ny resaka fahalalàhana miteny amin'ny aterineto.
Ka amin'ity volana ity, satria efa hifarana ny taona 2010, manao antso manokana izahay ho an'ny fanohanana amin'ny fanohizanana sy fanitàrana ny asa vitanay tamin'ity taona ity. Ny mpandrindra, mpanoratra ary mpandika teninay dia mandany ora maro isam-bolana hanambàrana ny haino aman-jerin'olon-tsotra avy amin'ny faritra sy ny fireneny, mifidy sy mampifandraika ireo feo tena mahasarika, tantara sy hevitra, manampy ho amin'ny fahafenoan'ny sarin'ny tontolo iainantsika.
Raha mino ianao fa manome fahalalàna ho an'izao tontolo izao izahay, mba manaova fanohanana . Na tariho tsotra fotsiny ireo tapaka sy namana hitsidika ny vohikala ary hanampy anay amin'ny fizaràna sy fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra. Fa indrindra indrindra, miaraha aminay hanao ny taona 2011 ho tsy hay hohadinoina sy hahafinaritra tahaka ny 2010!
- Ivan Sigal sy Georgia Popplewell
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/12/15/11358/
 Pakreport.org: https://mg.globalvoices.org<a href=
 Caucasus Conflict Voices (Feon'ny Disadisa any Caucasus): https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/caucasus-conflict-voices/
 loka goavana: https://globalvoicesonline.org/2010/12/03/russia-help-map-wins-runet-award/
 Technology for Transparency Network (Tambajotra Teknolojia ho an'ny Fangaraharahàna): https://transparency.globalvoicesonline.org/
 Emin Milli sy Adnan Hajizade: https://globalvoicesonline.org/2010/11/19/azerbaijan-emin-milli-released-but-another-activist-detained/.
 valin'ny Wikileaks: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/wikileaks-and-the-world/